YAAB: Baryahan Waxba Ma Qarsoomi Karaan- Kylian Mbappe Oo Lagu Qabtay Arin Qariib Ah Iyo Koox Wayn Oo Spain Ka Dhisan Oo Ay Farxad U Tahay. - GOOL24.NET
YAAB: Baryahan Waxba Ma Qarsoomi Karaan- Kylian Mbappe Oo Lagu Qabtay Arin Qariib Ah Iyo Koox Wayn Oo Spain Ka Dhisan Oo Ay Farxad U Tahay.
Waqtigan casriga ah ee la joogo ma jiro wax qarsoomayaa, waxaana marar badan loo soo joogay dhacdooyin iyo waxyaabo aan la filayn oo muuqaalkooda ama sawirkooda si lama filaan ah loogu baahiyay baraha bulshada. Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda PSG ee Kylian Mbappe ayaa lagu qabtay arin ay koox wayn oo Spain ka dhisan iyo jamaahiirta kooxdeedu soo dhawayn doonaan.
Kylian Mbappe ayaa loo arkaa in uu yahay xidiga mustaqbalka kubbada cagta aduunka xukumi doona ee ay adkaan doonto in la helo xidig kale oo isaga ula xifiltami kara qaabkii Messi iyo Ronaldo ay waqtiga dheer kubbada cagta ku soo haysteen kadib markii uu 20 sano jirkan reer France soo sameeyay bandhigyo uu aduunka kaga yaabsaday.
Kylian Mbappe ayaa kooxdiisa PSG guul ku hogaamiyay kulankii St Etienne isaga oo sii watay in uu garbaha u rito masuuliyada weerarka kooxdiisa kadib dhaawacyadii soo gaadhay Neymar Jr iyo Cavani laakiin arin ka baxsan kooxdiisa PSG ayuu Mbappe ku qabsaday baraha bulshada.
Baraha bulshada ayaa la soo dhigay waxyaabo uu Mbappe ka raadinayay Internetka iyada oo isla sawir laga soo qaaday waxyaabihii uu xidiga kooxda Paris Saint-Germain sida gaarka ah isha ugu hayay ee uu doonayay in uu wax ka ogaado.
Kylian Mbappe ayaa muujiyay in uu si khaas ah ula socdo kulamada ay ciyaarto kooxda Barcelona isla markaana waxaa la soo bandhigay isaga oo kulamada mashquulka badan ee Barca ka raadinaya Internetka isla markaana ay u soo baxeen afarta kulan ee xidhiidhka ah ee ay Barcelona ku ciyaari doonto martida oo iskugu jira saddexda tartan ee Champions League, Copa Del Rey iyo La Liga.
Xidiga kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe ayaa la arkay isaga oo aan kulamada kooxdiisa PSG raadinayn balse raadinaya kulamada u soo socda kooxdii sida wayn loola xidhiidhin jiray ee Barcelona waxaana baraha bulshada si wayn loogu wadaagay sida uu Mbappe ugu xidhan yahay kulamada Barcelona.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa ka mid ahaa kooxihii sida wayn u doonayay saxiixa Kylian Mbappe intii ayna kooxda PSG kula wareegin 180 milyan yuro laakiin waxa uu Mbappe uu muujiyay in uu taageere u yahay kooxda Barcelona isla markaana uu xataa sii calaamadsado taariikh iyo waqtiga kulamadeeda ay ciyaarayso.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo Barcelona u baahan in ay sii hesho badalka waqtiga dheer ee Lionel Messi ayuu sawirka Mbappe farxad wayn u abuuray jamaahiirta Barca kuwaas oo u arkay in xidiga reer France uu mustaqbalka kooxdooda ku soo biiri karo.
Proffiser gulleid barcelonita says:
Wxn umalaynayaa inaanu ugu xidhnayn ka taageere ahan balse uu ugu xidhan yahay siduu u ogan laha xalkeda ka hor lugta labad ee ucl-ka waayo waa mid kamida kooxaha ugu cad cad ucl-ka sidas darted uu u qiimaynayo afartan kulan ee awayga ah wxn aqon fican u leyahay tiimka uu tagero shaqsiga uu tagero wayna kadhacda kubadda markuu sidaas yahay arinku inaad ka dhabayso ujedkaga